Johnnie Carson oo Muqdisho Booqday
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka ee Arrimaha Afrika, Johnnie Carson ayaa Muqdisho booqday, sida ay madaxda DKMG ahi sheegeena, waa mas’uulkii ugu sareeyey ee booqda magaalo madaxda Somalia ilaa bilowgii sagaashanadii.
Mr. Carson waxa uu la kulmay Madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed iyo Ra’iisal Wasaare Cabdiwali Maxamed Cali, waxana la filayaa in uu magaalada Muqdisho hal maalin ku nagaado.
Ururka Alshabab ayaa arrintaas ka jawaabay, iyaga oo shaaciyey abaalmarin iyaga u gaar ah. Alshabab ayaa sheegay in qofkii keena xog sheegaysa halka uu ku sugan yahay Madaxweyne Obama in 10 neef oo geel ahla sii doono, halka qofkii keena xog sheegaysa halka ay ku sugan tahay Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka, Hillary Clinton, isaga la siin doono 10 digaag iyo 10 diiq.
Warbixin ku saabsan booqashada Kaaliyaha hoosta ka dhageyso.